Amathuba amashishini ama-6 kwimarike yaseSpain | Ezezimali
Ngaphandle kokungaqiniseki okuphezulu kwiimarike zezabelo zaseSpain, alithandabuzeki elokuba amathuba oshishino ahleli ngoku. Apho isalathiso esikhethiweyo sentengiso yesizwe, i-Ibex 35, isokola ukuhlala ngaphezulu kwenqanaba lama-euro angama-9.000. Ukuba yindawo ekubhekiswa kuyo eyahlukileyo kwi-downtrend kwi-bullish enye kwaye inokuba ngumzuzu wokuphuma okanye ukungena kwiimarike zezemali. Ke ngoko, lelinye lawona manqanaba aphambili ekuveleni kwamashishini eSpain.
Kule meko ngokubanzi, elinye lamaqhinga ekufuneka uwasebenzisile kutyalo-mali lwakho olukhawulezileyo. Ukuze ube kwimeko egqibeleleyo ukwenza imali ukonga ngeziqinisekiso ezikhulu zokuphumelela, ezisekupheleni kosuku ukuba zithini na. Ngothotho lwamaxabiso abonisa imeko yezobuchwephesha engenakulinganiswa kwaye enokuthi ibathathe inyuse ngokuhambelana namaxabiso abo. Ngaphandle kwezinye iintlobo zokuqwalaselwa kwezobuchwephesha nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ezi zizindululo, ngamanye amaxesha, ezinokubakho ukuphinda uhlaziye ngaphezulu kwe-10%. Ukusuka kumanqanaba akhoyo kwisicatshulwa kunokufezekiswa imbuyekezo enomdla kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kokuba ezinye zeenkxaso ezifaka igalelo elikhulu kuhlalutyo lobuchwephesha ziyahlonitshwa. Ngelixa kwelinye icala, zibheja kwizabelo eziza kwenza ngcono kunakwamanye amaxabiso esitokhwe. Umahluko obaluleke kakhulu phakathi kwenye kunye nezinye iindlela zotyalo-mali.
1 Amathuba oshishino: Enagás
2 I-Endesa ikhangela ukuphakama konyaka
3 I-Acciona: isimanga se-Ibex 35
4 ISolaria njengenketho yokuqikelela
5 USabadell, ejonge iyunithi ye-euro
6 Amathandabuzo ka-Ence
Amathuba oshishino: Enagás
Ngaphandle kwamathandabuzo, inkampani yegesi edweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain yenye yeentandokazi ukubandakanya kwipotifoliyo elandelayo yotyalo-mali. Elinye lamaqhosha okufezekisa iinjongo zalo iya kuba kukubonelela ngomqondiso wamandla oza kuhamba ngokudiliza ukuxhathisa okwangoku, kufutshane kakhulu namanqanaba angama-26 euros isabelo. Ukuba le nto iyenzeka, akukho mathandabuzo ukuba ekugqibeleni kuya kubakho ukutsala okuya phezulu okunokukhokelela kumanqanaba ngaphezulu kwe-27 okanye i-28 euro. Oko kukuthi, phantse i-10% kumandla ayo okuxabisa.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba eli xabiso lelinye lezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-Ibex 35. Ngaphandle kwento yokuba kwiinyanga ezidlulileyo iyekile ukuphakama kwayo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokudala amathandabuzo phakathi kwabatyali zimali abancinci nabaphakathi abaphakamisile ukuba lixesha lokuba bazilungise izikhundla zabo kwaye bonwabele ukwenziwa kwemali kwiinyanga ezilishumi elinambini zokugqibela zorhwebo. Ukongeza, lolunye ukhuseleko oluhambisa esona sabelo siphezulu kwimarike yesizwe. Ngenzuzo eqikelelweyo ejikeleze i-6.5% ngentlawulo esisigxina kunye neqinisekisiweyo minyaka le.
I-Endesa ikhangela ukuphakama konyaka
Emva kokudibanisa izikhundla zakho, ukwimeko yokuvelisa olunye utsalo olonyukayo olukusa phezulu. Le meko yenzeka ngenxa yokuba idlula ii-maxum zayo zonyaka ezikwi- amanqanaba angama-23, ama-30 ee-euro ngesabelo ngasinye. Ukuba bekunje, ayinakugwetywa ngaphandle ukuba kwiimbalwa ezilandelayo zinganyuka ziye kwi-27 euro. Ngolunye ulwahlulo lwe-bullish olubaluleke kakhulu kwaye olunokuthatha izabelo ze-Endesa kumanqanaba angacingekiyo kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo. Ukuba ikhona nakweyiphi na imeko enye yexabiso ekufuneka ithathwe kwi-radar.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba eli xabiso lecandelo lombane lelinye elihambisa a esona sabelo sikhulu kwizabelo zamazwe. Ngengeniso kulondolozo phantse lwe-7% ngentlawulo esisigxina kunye neqinisekisiweyo eyi-semi-yonyaka. Ukunikezela ngenzala ephezulu kakhulu kunaleyo inikwe zizo zonke iimveliso zengeniso esisigxina. Phakathi kwazo, iidipozithi zebhanki zexesha elide okanye iiakhawunti ezinengeniso ephezulu, ethi kuzo zombini ezi meko inike ingxelo ngenzala ye-1% kwezona meko zintle.
I-Acciona: isimanga se-Ibex 35
Imodeli yeshishini elitsha enikwe yile nkampani idwelisiweyo yenye yezona zinto ziphambili zokukhuthaza ukuba amaxabiso ayo anyuke, ubuncinci kwiinyanga ezimbalwa ezizayo zalo nyaka. Nangona kubekho into ethile ukudinwa ekuthengeni izikhundla ngenxa yesimo sokuthenga okungaphaya kokufumaneka kweli xabiso. Nangona kunjalo, abahlalutyi abaninzi bezemali bacinga ukuba isenokubanakho ukuphinda ihlaziye kumanani aphindwe kabini. Ngaphakathi kwitshaneli engenasiphako egqibeleleyo kwaye ngaphandle kokudodobala.
Ayizothusa into yokuba ukutsalwa okutsha kwe-bullish kunokukhula ukusukela ngoku. Kuya kuba lunomdla ukuthatha isikhundla kwixabiso lokuba ngaphakathi xa le meko ibonwa kwangaphambili ngabahlalutyi bezemali. Le yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa kuqwalaselwa okanye uphonononge iipotifoliyo zotyalo mali. Ukuzama ukufumana imbuyekezo ephezulu ukusukela ngoku. Ngayiphi na imeko, yinto esisigxina yokugcina engqondweni ukuvuselela imali yethu ekhoyo kutyalo-mali olwenziwe kwii-equities.
ISolaria njengenketho yokuqikelela
Eli xabiso lincinci ngenxa yeemali zalo zentengiso yenye yeendlela ezinokuthi zinike inqaku elincomekayo okanye endaweni yoko zimangalise kwiinyanga ezizayo. Nangona ibonakaliswa yifayile yayo ukungazinzi okukhulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ngumahluko obaluleke kakhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Yintoni eyenza ilunge kakhulu kwimisebenzi yorhwebo efuna amava angakumbi kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ayothusi into yokuba akukho lula kakhulu ukusebenza ngexabiso elifana neli sithetha ngalo.
Ngelixa kwelinye, ayinakulityalwa ukuba iSolaria lolunye lwezokhuseleko oluxabise kakhulu kule minyaka mibini okanye mithathu idlulileyo. Ngenxa yolindelo kwimodeli yayo yeshishini ngabatyali mali kwaye ivelise ukuba kwiinyanga ezimbalwa kukho liphindwe kathathu ixabiso lezabelo zabo engxoweni. Kwelinye lawona matyala abalulekileyo ophononongo kwimarike yemasheya kwaye etsala inani elililo labatyali zimali abancinci nabaphakathi ngeprofayili yotyalo-mali ethe chatha. Apho banokufumana imali eninzi kwiinyanga ezimbalwa, nangona besebenza apho umngcipheko uhlala uhleli.
USabadell, ejonge iyunithi ye-euro
Elinye lamaxabiso anokuba nohambo olude kwiimarike zezabelo. Ngethuba nje inkxaso ebalulekileyo ekhoyo kwiyunithi ye-euro iyahlonishwa. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Hayi ngelize, i umngcipheko ekusebenzeni kwakho Yinto enokubuyiselwa umva kwimisebenzi onokuyiphuhlisa ngeli xabiso elidibanisa i-Ibex 35.
Kodwa ukuba uyawahlonipha la manqanaba kumaxabiso akho, alithandabuzeki elokuba ukubanakho ukuphinda uhlaziyeke kunokuba ngaphezulu kunezinye iinkampani ezidwelisiweyo kwaye ngakumbi kwicandelo lebhanki. Ngale ndlela, kwi ixesha eliphakathi nelide banokufikelela ngokugqibeleleyo kwi-euro ezimbini ezinesiqingatha, ezinokuba kwinqanaba elifanelekileyo lokulungisa izikhundla. Ngaphandle komzuzu ombi iibhanki ezihamba nawo kwizabelo zaseSpain. Ngokukodwa, ngeebhanki ezincinci kunye naphakathi, ezinje ngale, I-Bankia okanye i-Bankinter.
Eli lelinye ixabiso elinokuthi linyuke xa ukunyuka kwexabiso lempuphu kunelisekile. Akumangalisi ke ngoko, ukuba ime phambili ukukhokelela ekunyukeni kwesalathiso sikazwelonke esikhethiweyo, i-Ibex 35, njengesiphumo ukuzithemba okuvukile phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona inxamnye nento enokwenzeka ngamancedo ayo kwichweba lasePontevedra. Ukuya kwinqanaba lokuba ayinakugwetywa ngaphandle ukuba kufuneka ivaliwe ngenxa yeengxaki zokusingqongileyo. Kule meko, isicombululo ekuphela kwaso iya kuba kukushiya isikhundla sabo ngesantya esithile. Phambi kokuwa kwimarike yemasheya enokuthi ivelise.
Ngayiphi na imeko, ibiyenye yexabiso lemfashini kwizabelo zamazwe ukusukela oko yajoyina i-Ibex 35 kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngokuhlaziywa okuye kwafikelela kumanani aphindwe kabini kwaye oku kukhokelele ekubeni kulandelwe kakhulu yinxalenye enkulu yeearhente zentengiso yesitokhwe. Ngedinomineyitha eqhelekileyo enjengokuguquguquka kokuguquguquka kwamaxabiso abo kwaye oku kukhokelele kwisiphithiphithi esingaphezulu kwesinye phakathi kwenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukusuka kule ndawo yokujonga, asikho esinye isisombululo ngaphandle kokujonga kakhulu ukuvela kwayo kwintengiso yemasheya. Kungenxa yokuba kuyinyani apho unokulahlekelwa yimali eninzi kwimisebenzi eyenziwa kule mihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amathuba amashishini ama-6 kwimarike yaseSpain